I-Très chique yabucala, indlu yesitudiyo enefenitshala
Isitudiyo esinefanitshala malunga ne-approx. 45 sqm ebekwe kwilali yasePuisserguer. Ixhotyiswe ngekhitshi yangoku epheleleyo, ibhafu / ishawari kunye neWC, ibalcony yaseFransi, kwindawo yokuhlala ezolileyo. 5-min. Hamba uye kwindawo yokubhaka, ivenkile enkulu, ikhemesti, kunye nazo zonke ezinye izinto eziluncedo. Ipaki yezemidlalo ene-boule, inkundla yentenetya, ibala lokudlala, inkundla yebasketball kunye neskatepark. Imizuzu engama-20 uqhuba ukuya kwiilwandle ezintle kumazantsi eBéziers, Canal du Midi, Orb River kunye neepaki zendalo nje imizuzu eli-10 kude.
Yahlula indawo yokungena yabucala ngegaraji / ishedi, enezinyuko ezikhokelela kwigumbi elikhulu lestudiyo elinekhitshi langoku eligcweleyo kunye nesilingi ephezulu eneA / C.
ICanal du Midi ePoeles naseCapestang nje imizuzu emi-5 kude. Iidiliya kuyo yonke indawo. Iikhilomitha ezili-15 ukusuka kwisixeko sembali saseBéziers kwaye ngaphantsi kwemizuzu engama-20 yokuqhuba imoto ukuya kunxweme lwaseSerignan, Frontignan kunye neValras Plages. Okanye uqhubele emantla kwipaki yendalo yaseHaut Languedoc, amaziko ewayini aseSaint Chinian kunye neFaugeres, okanye ukukhwela iphenyane kunye ne-kayaking kuMlambo i-Orb eCessenon, ePierrerue okanye eRoquebrun. Konwabele ukuthenga nokutya kwiimarike ezigqunyiweyo kwilali eyahlukileyo yonke imihla evekini. Abantu basezilalini abangathobekiyo, abanobuhlobo.
IsiNgesi kunye nesiFrentshi sithetha ukungena kunye nenkonzo yokuphuma. Owayesakuba ngumninikhaya kunye neSuperhost, uNoeleen uyafumaneka ngoncedo. Ngesicelo sokucoca ngeveki kunye nokutshintshwa kwelinen kunokulungiswa. Imali eyongezelelweyo ye-€ 25 ngomntu ngamnye.
IsiNgesi kunye nesiFrentshi sithetha ukungena kunye nenkonzo yokuphuma. Owayesakuba ngumninikhaya kunye neSuperhost, uNoeleen uyafumaneka ngoncedo. Ngesicelo sokucoca ngeveki kunye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Puisserguier